Nlele igwe ojii: Ihe ịchọrọ ịma - Motadata
Bipụtara: Septemba 28, 2018
Emelitere: May 09, 2022
Dị dị iche iche nke onyinye igwe ojii
Igwe nlekota igwe ojii: Onyunyo na nke Ohaneze ma obu igwe ojii?
N'ime ụwa nke taa jikọtara ọnụ, onye ọ bụla nwere njikọ ịntanetị na-enweta igwe ojii ụbọchị niile site n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Nke a bụkwa eziokwu maka nzukọ niile; dị ka igwe ojii abụrụla ihe a na-anaghị agbanwe agbanwe nke ọrụ yana ọ bụ ihe doro anya na ịchọrọ a igwe ojii nlekota ngwọta iji lelee ya.
Ndị otu na-adabere na onyinye igwe ojii iji nyefee ndị ọrụ ọdịnaya dịka ọ dịtụbeghị mbụ n'ụzọ a pụrụ ịdabere na ya, ngwa ngwa na nchekwa. N'agbanyeghị uru niile, ihe mgbagwoju anya ngwakọ igwe ojii chọrọ ngwọta nlekota igwe ojii siri ike iji nyochaa usoro ahụ mgbe niile iji bulie ma kpochapụ ihe egwu ma ọ bụrụ na ha bilitere.
Igwe ojii nyocha bụ usoro na-aga n'ihu nke nyocha na ijikwa arụmọrụ arụmọrụ nke igwe ojii na usoro metụtara. A na-egbukarị ya site na enyemaka nke njikwa akụrụngwa IT na nlekota ngwanrọ nke na-enye ohere na ịchịkwa igwe ojii. Ndị admins IT nwere ike nyochaa ma soro ọnọdụ arụmọrụ, arụmọrụ yana ahụike nke igwe na igwe ojii.
Enwere ụdị ọrụ igwe ojii dị iche iche chọrọ nleba anya. Ọ bụghị naanị maka sava sava ndị a kwadoro na Google App Engine, Azure ma ọ bụ AWS. Maka ndị ahịa azụmaahịa ọ bụ ihe niile banyere ileba anya n'ihe ha na-eri (Ihe akụrụngwa - Ngwa, Ebe nchekwa data, OS, Server, Network wdg) ma na-eji ndụ ha kwa ụbọchị na-egosi na ihe ị na-ejikwa na ihe onye na-ere ahia na-achịkwa.
Ụdị ikpo okwu
Software dị ka Ọrụ (SaaS) Thedị kachasị ewu ewu nke na-eme ngwa ahụ site na ihe nchọgharị. Ndị ahịa SaaS nwere ike ịnụ ụtọ ngwanrọ ahụ na-enweghị mgbagha maka mmepe, mmezi, nkwado, mmelite, ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara. • Hazie dịka ịchọrọ
• Nweta enweghị nkebi site na ịntanetị
• Na-ewepụ nchegbu infra
• Ndokwa na nkwado jikọtara ọnụ Ngwa Google, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, Office 365, Gmail, GoToMeeting, Netflix
Egwuregwu dị ka ọrụ (PaaS) Na-etolite ngwa ngwa na ihe ndi mmadu na-acho ime ya, ndi na emepe emepe chọrọ ilekwasiri anya na ichie, nwaa ya na iwepu ngwa, karie oge ha n'ibu ihe ogugu ngwaike dika ijikwa patch nche na mmelite sistemu. • Obodo siri ike na-ewu ngwa igwe ojii
• Enweghị nsogbu nke ịkwalite infra software
• Ọnụ ego dị ala dị ka ntinye ego n'ihu anaghị achọ
• Lekwasị anya na mmepe na-enweghị nchegbu maka akụrụngwa AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos
Inframa dika oru (IaaS) N'ala ala nke ndị na-ere ahịa IAS, na-ebughari ma na-ejikwa ngwaike ahaziri ahazi na nke ọma ma mee ka ndị ọrụ jiri ngwa igwe mebere ma ọ bụ na-agbakọ ike na-enweghị njikwa ihe nkesa na-arụ ọrụ ike ma ọ bụ itinye aka na ngwaike. • Mbelata TCO
• Pay-ka ị na-aga
• Ịnweta akụrụngwa IT dị elu
• Ọnụ ọgụgụ elu & ala ala dabere na ihe achọrọ DigitalOcean, Linode, Rackspace, AWS, Cisco Metapod, Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE)
Igwe ojii dị ka ihe ngwọta dị ka ihe omimi jigsaw nke nwere akụkụ dị iche iche na-eme ọfụma, ọ dịkwa ezigbo mkpa na akụkụ niile na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla ka ewepụta ọpụpụ ahụ ka mma. Igwe ojii na-enyocha ihu ọma gụnyere ọrụ dịka:
Nlekota weebụsaịtị: Ndepụta usoro, okporo ụzọ, nnweta na ojiji nke weebụsaịtị weebụsaịtị
Nyochaa igwe nke mebere: Nyochaa akụrụngwa nke ezi ihe dị iche iche na igwe ọ bụla
nlekota nchekwa data: Usoro nlekota oru, nyocha ajuju, nnweta, na oriri nke ihe nchekwa data igwe ojii
Nyochaa nke netwọkụ mebere: Nyochaa akụrụngwa netwọkụ, ngwaọrụ, njikọ, na arụmọrụ
Igwe ojii nchekwa nchekwa: Nyochaa ihe nchekwa na usoro ha nyere na igwe eji arụ ọrụ, ọrụ, ọdụ data, na ngwa
Private Easy Njikwa mma & visibiliti n'elu sistemụ & nchịkọta software
Ọha / ngwakọ siri O siri ike ileba anya ka data dị na igwe ojii na nke ọhaneze
Bido nyocha ozugbo
Igwe nlekota igwe ojii abụrụla akụkụ dị oke mkpa ma nyochaa ya ọ dị mkpa karịa. Ezigbo ihe nlekota igwe ojii na-eme ka ụlọ ọrụ igwe ojii rụọ ọrụ site na mpaghara dị iche iche na metrik iji hụ na nsonaazụ chọrọ ka a rụpụtara. Nke a bụ ebe nyocha nlekota dị ka Motadata Cloud, na-enye otu echiche nke akụrụngwa IT - netwọkụ, ngwa, nchekwa data, sava iji nyere gị aka idozi nsogbu gị siri ike na nsogbu a pụrụ ịdabere na ya ngwa ngwa, naanị & oke ego.